R2P : U.N လူ့ အခွင့်ရေးကောင်စီဟာ လူ့ အခွင့်ရေးနဲ့ လူမျိုးတုန်းသတ်ဖြတ်မှု ကိစ္စ(Genocide) တွေမှာ လုံခြုံရေး ကောင်စီ ကိုတောင် သောက်ဂရုစိုက်စရာ မလိုပဲ ကျော်လုပ်နိုင်တဲ့အာဏာ ရရှိထားပါတယ်။ | Dr Ko Ko Gyi's Blog
« Insya Allah you’ll find your way
ဗလီ တွေမှာ ဓား ။တုတ် တွေ ထားလို့ လည်း ဘယ် ဘုန်းကြီးကျောင်း။ဘယ် ဗုဒ္ဓဘာသာတဦး တယောက်မှ သတ်ဖြတ် မီးရှိုဲံ့ တာ မခံ ရဘူးဗျ – ကိုယ့် ဟာကိုယ် ကာကွယ်ဖို့ ။ »
ကုလ လူ့ အခွင့်ရေး ကောင်စီ မှာ လုပ်ပိုင်ခွင့် အများအပြား ရှိပါတယ်။သူဟာ အထွေထွေ ညီလာခံ မှာ တောင် ဆန္ဒသဘောထောက်ခံချက် မယူပဲ မြန်မာ ကိစ္စ ကို လုံခြုံရေးကောင်စီ ကို တိုက်ရိုက်တင် ပြီး စစ်ရေး နည်းနဲ့ အရေးယူဖို့ အထိတောင်းဆိုခွင့် ရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့ လုံခြုံရေး ကောင်စီမှာ ကမ္ဘာ့ငြိမ်းချမ်းရေးကိုခြိမ်းခြောက်နေတဲ့ မိစ္ဆာနိုင်ငံ နှစ်ခု ရှိပါတယ်။ သူတို့ က ဗီတို အာဏာ နဲ့ ပယ်ချ ရင် စစ်ရေးအရအရေးယူလို့ မရပါဘူး။ဒါဟာ နောက်ဆုးံ ဖြစ်လာနိုင်တဲ့ အခြေအနေပါ။မိစ္ဆာ နှစ်နိုင်ငံ ကတော့ အားလုးံသိကြတဲ့အတိုင်း မြန်မာ ရဲ့ ပထွေး တရုပ်နိုင်ငံနဲ့ ရုရှ နိုင်ငံပါ။
ဒါဆိုရင် နောက်တမျိုး လှည့်ပြီး အပြစ်ပေးလို့မရဘူးလားဆိုတော့ ရှိပါသေး တယ်။U.N လူ့ အခွင့်ရေး ကောင်စီဟာ ဘော့စနီးယား နဲ့ ကိုဆိုဗို မှာ ခရိုအတ် နဲ့ဘော့စနီးယာ မွတ်စ် ။အလ်ဘေးနီးယား မွတ်ဆလင် တွေကို သတ်ဖြတ်ခံရမှု ကိစ္စ တွေပြီးတော့နောက်နောင်ဒါမျိုးတွေဖြစ်လာရင် ချက်ချင်းအရေးယူဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့ လုပ်ပိုင်ခွင့်အများအပြားကို အာဏာ
အပြည့် ရရှိထားပါတယ်။U.N လူ့ အခွင့်ရေးကောင်စီလို နေရာ ကို မြန်မာ ။မြောက်ကိုးရီးယား အစရှိတဲ့ နာမည်ပျက် နိုင်ငံတွေကို နေရာမပေးပါဘူး။
သူ ဟာ နောက်ဆုးံ အရေးပေါ် အခြေအနေတခုမှာ လုံခြုံရေး ကောင်စီ ကို ဂရုမစိုက်ပဲ ကုလ အတွင်းရေးမှုးချုပ် ကို တိုက်ရိုက်အရေးဆိုပြီး ကုလ အတွင်းရေးမှုးချုပ်ရဲ့ တောင်းဆိုမှု နဲ့ NATO ကို ဝင်တိုက်ခိုင်းလို့ ရပါတယ်။
ဘော့စနီးယား နဲ့ ကိုဆိုဗို တုန်းကလည်း ရုရှ နဲ့ တရုပ် က လုံခြုံရေး ကောင်စီမှာ ဗီတိုနဲ့ ပယ်ချပြီး ကန့် ကွက်နေတဲ့ ကြားက ကုလ အတွင်းရေးမှုချုပ် အမိန့် နဲ့ NATO က ဝင်ဆော် သွားတာပါ။ ဆာဗ့် လူမျိုး ဆိုတာ ရုရှ နဲ့ လူမျိုးအတူတူ ပါပဲ။ဒါပေမဲ့ တကယ်ဖြစ်လာတော့ ရုရှ ဟာ သူ့ လူမျိုးတွေကိုမကယ်နိုင်ခဲ့ပဲ ဆားဗီးယား ဟာ ကြေမွ သွားအောင် လက်တုန့် ပြန် အရေးယူ ခြင်း ခံခဲ့ရပါတယ်။
လူပါးဝ တဲ့ တရုပ် ကို U.S သမ္မတ ကလင်တန် က တရုတ်သံရုံး ကို ဗုးံကြဲ ပြီး သတိပေး ခဲ့ပါတယ်။
ဒါဟာ မြေပုံ အမှားပါ လို့အမေရိကန်က ငြင်းပေမဲ့ တကယ်တော့ တမင်သက်သက် သံရုးံ ကို ရွှေ့ မပေးနိုင်ဘူး လို့လူပါးဝ ပြီး ငြင်းဆန်တဲ့ တရုပ်ကို ပညာပေး လိုက်တာပါ။သက်သေတွေလည်းထွက်ခဲ့ပါတယ်။ တကယ်ဖြစ်လာတော့ မြန်မာရဲ့ပထွေး တရုပ်ဟာလေတောက်ကျယ်ကျယ် မလည်ရဲပဲ သေသွားတဲ့ တရုပ်သံအမှုထမ်းတွေအတွက် လျော်ကြေးလေး ယူပြီး ပါးစပ် ပိတ်နေခဲ့ ရတာပါ။
ဒါဟာ လက်ရှိ U.N လူ့ အခွင့်ရေးကောင်စီရဲ့ အာဏာ ကို သုးံသပ်ပြခြင်းသား ဖြစ်ပြီး မြန်မာအစိုးရ ကလည်း သူတို့ ကို ဝင်တိုက်မဲ့ အနေအထားကို အရောက်ခံမှာမဟုတ်ပါဘူး။
U.N လုံခြုံရေး ကောင်စီ ရဲ့ အာဏာဟာ တကယ်တမ်းဖြစ်လာရင် လုံခြုံရေး ကောင်စီထက် ပိုပြီး အာဏာရှိပါတယ်။အထူးသဖြင့်လူမျိုးတုန်းသတ်ဖြတ်မှု ကိစ္စ တွေမှာ သူဟာ လုံခြုံရေး ကောင်စီ ကို ကျော်ပြီး အရေးယူနိုင်စွမ်း ရှိတယ်ဆိုတာကို တင်ပြတာသာဖြစ်ပါတယ်။ ဘော့စနီးယား။ကိုဆိုဗို ။ခမာနီ လူသတ်ပွဲ တွေကို သင်္ခန်းစာ ယူ ဆွေးနွေး အဖြေရှာပြီးနောက် ကုလသမဂ္ဂ ဟာ U.N လူ့ အခွင့်ရေးကောင်စီ ကို ပြန်လည်ဖွဲ့စည်း ခဲ့ပြီး 2000 ခုနှစ် လောက်က စပြီး လုအ်ပိုင်ခွင့်အာဏာ ကို အပြည့် တိုးပေးခဲ့ ပါတယ်။
Tags: Africa, Anne Bayefsky, International Day of Solidarity with the Palestinian People, NATO, R2P, United Nation, United Nations Division for Palestinian Rights, United States Ambassador to the United Nations, Washington Free Beacon
This entry was posted on November 24, 2013 at 5:29 am and is filed under Uncategorized.	You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leavearesponse, or trackback from your own site.
One Response to “R2P : U.N လူ့ အခွင့်ရေးကောင်စီဟာ လူ့ အခွင့်ရေးနဲ့ လူမျိုးတုန်းသတ်ဖြတ်မှု ကိစ္စ(Genocide) တွေမှာ လုံခြုံရေး ကောင်စီ ကိုတောင် သောက်ဂရုစိုက်စရာ မလိုပဲ ကျော်လုပ်နိုင်တဲ့အာဏာ ရရှိထားပါတယ်။”
November 24, 2013 at 5:36 am | Reply
With the tactic approval of NATO, NATO member Turkey could lead the willing partner OIC member Muslim Nations to invoke the R2P on Myanmar Government.